यसरी बन्दैछ पहाड खोपेर बाटो – MySansar
यसरी बन्दैछ पहाड खोपेर बाटो
Posted on March 29, 2015 March 27, 2015 by Salokya
तपाईँले यदाकदा देख्नुभएको होला विदेशतिरका फोटोमा अग्ला पहाडका बीच चिल्लो बाटो। पहाडै खोपेर बनाइएको जस्तो। रोमाञ्चित हुनुहुन्छ होला अहो हाम्रो देशमा पनि यस्तै पहाड छ, यसरी नै किन बाटो नबनाएका होलान्।
केही अघि मनाङ सदरमुकाम चामेबाट उपल्लो मनाङ जाँदै गर्दा एउटा रेगुलर बाटोमा कृपया बाटो बन्दैछ, यताबाट नजानु होला लेखिएको थियो। हामी वैकल्पिक बाटो भएर गएका थियौँ। पारीपट्टीको वैकल्पिक बाटोबाट जे देख्यौँ, त्यो गजबको थियो। यो बाटो बनिसकेपछि साँच्चिकै यो गजबको बाटो हुनेछ। किनभने यो पहाड खोपेर बनेको बाटो हो। हेर्नुस् केही फोटो-
8 thoughts on “यसरी बन्दैछ पहाड खोपेर बाटो”
नेपालमा प्रबिधिको प्रयोग कहीँ गर्न सक्दैनन् है ?
हुन त प्रशासन पढेका मात्र मुख्य सचिब बन्न पाँउछन्, सल्लाहकार सबै अार्टस् र कमर्स पढेका ।
बिश्वमा टनेल बोरिङ मेसिनहरूको बिकास यस्तरि भएको छ कि यीनै ४।५ जना कामदारले त्यही काम सयाैं गुना छिटो सक्काउन सक्छन ।
के गर्नु ? दुःख लाग्छ ।
को हो एस्तो काम को कन्सलत्यंत? गरिब को ज्यान को कुनै सेफ्टी छैन, एस्तो पनि हुन्छ तरिका ?? तुरुन्त कारबाही गर्नु पर्ने त्यो तोरी लठक ठेकेदार र इन्जिनिएर भनाउदा मुर्ख हरु लाइ.
ए बाबै हो, येत्रो मिहिनेत गरेर पहरो खोपेर मोटरबाटो मनाङ्ग लानुसट्टा ति २-४ हज्जार मनांगे हरुलाई तराइतिर पुनर्बास गराउनु सस्तो पर्थ्यो होला (तेस्मा पनि आधाभन्दा बढी मनांगेहरु काठमान्डूको छेत्रपाटिमै बस्छन) अथवा केवलकार सस्तो हुन्थ्यो होला / यो बाटोको आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुन तोरिलाउरे कन्सल्ट्याण्ट पर्यो? ए डि बि अथवा बिस्व ब्याङ्क ले नै हुनुपर्छ यो कन्सल्ट्याण्टलाइ काम दिएको!
राजकुमार रोक्का says:
हामी नेपाली बहादुर छोउ। ४/५ जना नै काफी छोउ यो पहाड फुटाल्न। अझ हाम्रो राजेश दाइले पाय भनेत, फलामको हातले एकै छिनमा बनैदिनुहुन्छ। ।।।।।कुरो।।।।।
जम्मा जनशक्ति त्यहि ५ जना मान्छे हो ? चाडै बन्ला जस्तो छ |
उदेश्य सहि तर तरिका गलत !!!
कामदार हरुको कुनै सुरक्ष्या गरेको देखिदैन ! कुनै आधुनिक स्रोत र साधनको प्रयोग गरेको देखिदैन ! बिचरा ३-४ जना कामदार हरुले गल र गैची ले खोपेर कसरि र कति बर्षमा तयार होला यो बाटो ??
गृहमन्त्रि श्री ५ बामदेब ले भनेको जस्तै गरि बरु यो चाहि विदेशीलाई दियो भने राम्रोसंग बन्थियो कि ?
प्रयास एकदम राम्रो छ ।
मेरो बिचारमा अहिले बढी मिहनत र पैसा बढी खर्च भए भविश्यमा पैरो जाने डर छैन र मरम्मत सम्भारमा किफायत जस्तो छ ।
वातावरणीय हिसावले उत्कृष्ट देखिन्छ ।
कत्ति न बातावरण बिग्य भैटोपलेको, किन उत्कृस्ट?
तेत्रो पहरा खोपेको ढुंगा कता जान्छ, बातावरणमै होइन, अनि धुलो? ब्लास्टिङ्गको बातावरणिय प्रभाब कस्तो हुन्छ थाहा छ?